Al-Shabaab oo Xukuno Kala Duwan ku Riday Dad Shacab ah
Home Somali News East Africa Al-Shabaab oo Xukuno Kala Duwan ku Riday Dad Shacab ah
Magaalada Baardheere ee Gobalka Gedo ayaa waxa ay Al-Shabaab ku xukumeen afar qof oo kamid ah dadka deegaan islamarkaana ay ku eedeeyeen dambiyo kala duwan.
Sida ay sheegayaan wararka afarta qof ee la xukumay ayaa waxaa ku jirtay haweenay kamid aheyd dadka deegaanka taasi oo ay damacday inay lacag laaluush ah siiso taliyaha Saldhiga Degmada Baardheere ee Gobalka Gedo.
Afarta ruux ayaa waxaa lagula kala eedeeyay saddex kamid ah inay gudaha Magaalada ku dhex isticmaaleen waxyaabaha maanka dooriya oo ay Shabaab Degmadaasi ka mamnuuceen beri hore.
Haweenayda afaraad ayaa la sheegay in markii ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada Xisbada ee Shabaab xabsigana la dhigay ay damacday inay bixiso lacag laaluush ah taasi oo keentay in meel fagaare ah lagu xukumo.
Qaadiga Maxkmada Shabaab ee Degmada baardheere ayaa ku xukumay haweenaydaasi in lagu dhufto 10-karbaash ah taasi oo ciqaab unoqnaysaa lacagta laaluush ah ee ay dmacday inay siiso sarkaalka ka tirsan Shabaab.
Al-Shabaab ayaa dhowr jeer Degmada Baardheere waxa ay ku xukumeen dad kala duwan kuwaasi oo ay ku qabteen waxyaabo ay Shabaab Degmadaasi beri hore ka mamnuuceen.